Erga dubbiin 'boolla kosii' dhagaahamee booda Tiraamp dubbicha haalaan - BBC News Afaan Oromoo
Erga dubbiin 'boolla kosii' dhagaahamee booda Tiraamp dubbicha haalaan
15 Amajjii 2018
Goodayyaa suuraa Pireezideent Doonaald Tiraamp Biyyoota Afrikaa, El Saalvadoorii fi Heeytii 'boolla koosii jechuun arrabsan jedhamuu haalan.
Pireezidant Tiraamp ani 'rakkoo sanyummaa' hin qabu jechuun biyyoota Afrikaa 'boolla kosii' jechuun arrabsaniiru jedhamuu isaanii haalaan.
Marii Riifoormii dhimmaa godaansaarratti taa'ame irratti Pireezidant Tiraamp jechicha dubbataniiru jedhamee gabaafamaatti jira.
Amma ammoo ibsa gaazexessitootaaf kennaniin 'ani sanyummaa hin qabu. Namoota hanga ammaatti gaaffiifi deebii taasiftaniif keessa namni 'rakkoo sanyummaa' hin qabne anadha jedhaniiru.
Ibsi saanii kun erga uummata gurraacha arrabsaniiru jedhamee booda kallattiin dhimma kana irratti ibsa kennan isa jalqabaati.
Wanti Pireezidentichi jedhaniiru jedhame maalii?
Jechichi kan dhagaahame erga seeraa baastonni paartilee lameen irraa babbahan Roobii darbe Pireezidanticha waliin dhimma godaansaa irratti wixinee haraa qophessuuf mariyatanii boda.
Tarbanoota darban keessa bulchiinsi Tiraamp hayyama jireenyaa yeroo ( Temporary Protected Status) lammilee biyyoota garaa garaa amma biyyatti keessa jiraatan mulqeera.
Boodas ripportaroonni hedduun walgayii dhimma godaansaarratti ta'aan irratti Pireezidantichi 'maaliif lammilee biyyoota 'boolla kosii' irraa dhufan simanna?' jedhaniiru gabaasa jedhu qabatanii bahan.
Haasaa miidiyalee waliin taasisaniinis lammiilee biyyota balaa uumamaa, waraanaa fi dhibeedhaan rakkatan irraa dhufaniif hayyama jireenyaa yeroo kennuurra, lammilee biyyoota akka Noorweey irraa dhufaniif kennuu qabdis jedhaniiru.
Akka ragaaleen mul'isanitti Pireezidant Tiraamp godaantonni hedduun hayyama jireenyaa yeroo kan argatan biyyoota akka El Saalvadoora, Hunduraasii fi Heeyitii irraa warra dhufan akka ta'e yeroo itti himamu warra Heeytii moo? warra Heeytii hedduu barabaannaa? jechuun gaafataniiru.
Eenyufaatu jedhaniiru yaada jedhu deeggare?
Pireezidantichi jimaata darbe haasaan haasa'e ulfaatoo ta'aniis jechoota gabaafaman garuu itti hin fayyadamne yaada jedhu ergaa tiwiitaraa irratti maxxansaniin beeksisaniiru.
Itti dabaluunis warra Heeyiitii arrabsaniiru jedhamuu haalanii, warra paartii Dimookraatotaatu uumee odeessas jedhan.
Haa ta'umalee bakka bu'aan Seeneetii Diik Darbiin warra pireezidantichi jechicha jedhaniiru jedhan keessaa tokko. Pireezideent Tiraamp walgahii sana irratti, 'haasaa jibbaan guutame, safuu qabuufi rakkoo sanyummaa qabu' haasa'aniiru jadhan.
Hoogganaa nageenya biyya keessaa Kiriisteen Neelseen dabalatee Seera baastonni paartii Riipaablikaanotaa hedduun walgahicharra turan garuu Obbo Tiraamp akka jedhame sanatti haasa'uu isanii hin yaadannu jedhaniiru.
Haa ta'uyyuu malee bakka bu'aan seeneetii achi turan Lindiseey Girhaam Pireezidantichi yaada sana kennuu isanii hin haalle.
Af-yaa'iin bakka bu'oota uummataa Ameerikaa ammaa fi miseensi gaamessi paartii Riipaablikaanotaa Pool Riyaan yaadni Doonaald Tiraamp dhimma godaansaa irratti kennan 'kan hin milkoofneef' akkasumas 'bu'a dhabeessa' dha jechuun ibsaniiru.
Dubdeebii hanga ammaa jiru maali?
Tokkummaan Aafrikaa jimaata darbe waan Pireezdeentiin Ameerikaa jedhan jedhameen nahuu fi aaruu ibsuun Pireezideentichi dhiifama akka gafatan gaafatera.
Dubbii himaan Mirga Namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii Ruupert Koolviil ibsa miidiyaaleef Geeneev irraa kennaniin ''jechi biraan itti fayyadamnu hin jiru rakkoo sanyummaa jechuun ala, biyyoota fi ardiilee walitti qabdee boolla kosii hin jettu,'' jedhan.
Bakka bu'oonni Dimookraatotaa hedduun haasa'aa pireezideentichi dhiyeenya kana bakka bu'oota uummataaf godhu jedhamee eegamu irratti yaada amma kennan kana balaaleffachuuf hirmaachuu dhisuuf yaadaa jiru.
Tiraamp waa'ee baqattoota Ameerikaa keessa jiranii 'hamaa dubbatan'
Itoophiyaatti daa'ima ji'a 9 dabalatee namoota haaraa 8 irratti koronaavaayirasiin argame
Gaggeessitoonni biyyoota addunyaa MM Booris Joonsaniif jajjabina dhaaman
'Afriikaan dirree itti talaallii Covid-19 shaakalan miti'
Ameerikaatti koronaavaayirasiin ollaa warra gurraachaa 'goolaa jira'
Qulqullina waajira keessaniifi dhibee Covid-19
Biyyoonni 5 dursanii COVID19 irraa dandamachuu malan kami?
Paastarri Covid19 haalaan hafarfame jedhe vaayirasichaan qabamee du’e
Chaayinaan osoo sababa COVID19 namni jalaa hin du'iin ooltee bulte
Namtichi ‘daabboo bituuf’ km380 ol konkolaataan imale adabame